Abavelisi kunye nabaxhasi bePolyquaternium-22 - China Polyquaternium-22 Factory
IPolyquaternium-22 yiCopolymer ye-dimethyldiallyl ammonium chloride kunye ne-acrylic acid.
IPolyquaternium-22 yi-cationic co-polymer ehlawuliswe kakhulu ekwaziyo ukubonisa zombini iimpawu ze-anionic kunye ne-cationic. phucula iipropathi ezimanzi nezomileyo zeemveliso zokhathalelo lweenwele, kunye nokwenza ngcono ukuziva kwiimveliso zokhathalelo lolusu.
IPolyquaternium-22 inegalelo kwisiliphu, ukuthambisa kunye nobutyebi kwifom. Iphucula ukudibanisa okumanzi kwimixube yeeshampu kwaye ikwaphucula ukulawulwa kweenwele ngokubanzi. Ifaka ukuziva kugudile, velvety kulusu kwaye inika ukufuma okugqwesileyo. Ibonisa ulusu lwasemva kokuhlamba luziva kwaye luyanciphisa ukuqina emva kokomisa ulusu. Iimveliso zegumbi lokuhlambela zifumana amagwebu atyebileyo ngozinzo oluphuculweyo.
IPolyquaternium-22 isetyenziswa kwiishampu, izinto zokupholisa, ii-bleach, idayi yeenwele, amaza okusisigxina, iimveliso zesitayile, amafutha okuthambisa, izinto zokuthambisa, iimveliso zebhafu, iimveliso zokucheba kunye neesepha.